Ny areti-mandringana: miely any Madagascar - sy Seychelles?
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny areti-mandringana: miely any Madagascar - sy Seychelles?
Oktobra 11, 2017
Ny manampahefana misahana ny fahasalamana any Seychelles dia nanamafy fa olona 1 no nanaporofo fa voan'ny Pneumonic pest, ary mitoka-monina izy izao ary tsaboina amin'ny antibiotika.
Mpanazatra baskety iray any Seychellois no namoy ny ainy tamin'ny faran'ny volana lasa teo tao amin'ny hopitaly iray, renivohitr'i Madagasikara, hoy ny Androany any Seychelles, izay 42 no maty tamin'ny “Fahafatesana Mainty.”
Ilay mpanazatra, Alix Allisop, dia nanampy ny Tompondakan'i Beey Vallon Heat ho an'ny lehilahy Seychelles nandritra ny fiadiana ny tompondakan'ny Ocean Ocean Club Indiana. Ny governemanta Madagascar tamin'ny faran'ny herinandro dia nanamafy fa ny fahafatesan'i Allisop dia vokatry ny pesta amin'ny pnemonia. Ireo mpikambana hafa ao amin'ny delegasionan'ny baskety Seychellois, izay nifandray akaiky tamin'i Allisop, dia notandremana hatramin'ny niverenany teto an-tanindrazana, hoy i Gedeon. Ao amin'ny Akademia Miaramila ao Perseverance izy ireo izao, nosy haverina any ivelan'ny tanànan'i Victoria.
Araka ny lazain'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny pesta amin'ny pnemonia, na areti-mifindra avy amin'ny havokavoka, dia endrika maloto indrindra ary afaka miteraka valanaretina mahery vaika amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny olona amin'ny alàlan'ny rano mitete avy amin'ny rivotra, ary koa ny kaikitry parasy avy amin'ny biby mampinono voa. Ny fe-potoana fanamoriana dia mety ho fohy 24 ora.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao Seychelles, ny minisiteran'ny fahasalamana Seychelles tamin'ny alarobia dia nanoro hevitra ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy mpiasan'ny fitsangatsanganana rehetra hanakivy ny olona tsy handeha ho any Madagascar noho ny aretina pesta. Napetraka ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana fanampiny ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe Seychelles.
Jude Gedeon, kaomisera misahana ny fahasalamam-bahoaka any Seychelles, dia nilaza fa nametraka «scanner» ny mpandeha an-tongotra sy ny mari-pana amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena mba hahitana tranga. Omena endrika ihany koa ireo mpandeha nidina mba hambara raha misy soritr'aretina mitovy amin'ireo nateraky ny pesta.
Fanampin'izany, sekoly roa no nanamafy fa hikatona mandritra ny herinandro izy ireo, noho ny tsy fahampian'ny mpampianatra ao amin'ireo andrim-panjakana ireo, satria nomena 6 andro fialan-tsasatra izy ireo ary napetraka tamin'ny fanaraha-maso an-trano ao an-trano noho ny fiahiahiany fifandraisana mivantana amin'ny ny raharaha voamarina. Na dia tsy manana soritr'aretina aza izy ireo, ny tsirairay amin'ny fanaraha-maso dia omena fitsaboana mialoha ihany koa.
Eto Madagasikara dia voarara ny fivorian'ny besinimaro eto an-drenivohitra, izay farafahakeliny 114 ny olona voan'ny virus hatramin'ny faran'ny volana aogositra lasa teo.
Ilay areti-mandringana dia matetika no heverina ho toy ny tantara tamin'ny vanim-potoana antenantenany, saingy mbola mivoatra ihany io eto Madagasikara, izay ahiahin'ny fizaran-taona ny aretina. Ny firenena dia miaina izay mety ho faran'izay mahafaty indrindra tao anatin'ny taona izay olona manakaiky ny 200 noheverina fa nararin'ny pesta nanomboka ny volana aogositra, hoy ny minisiteran'ny fahasalamana eto Madagasikara.
Ny ankamaroan'ny tranga amin'ity taona ity dia ny pnemonia, izay azo amindra amin'ny kohaka, ary mety hahafaty olona iray voan'ny aretina ao anatin'ny iray andro. Mba hampihenana ny valan'aretina, manakatona vonjimaika ireo andrim-panjakana i Madagasikara. Nandidy ny hanakatonana oniversite roa ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, ary nisy sekoly hafa nanidy varavarana manerana ny firenena, ao anatin'izany ny renivohitra, Antananarivo, mba hahafahan'ny trano manaparitaka bibikely.
Ny tsimokaretina bubonic dia azo tsaboina amin'ny antibiotika, ary ny World Health Organization dia nandefa antibiotika mihoatra ny tapitrisa tapitrisa tany amin'ny firenena. Na izany aza, raha tsy voatsabo dia afaka miparitaka amin'ny lalan-drà mankany amin'ny havokavoka ny bakteria ary miteraka pesta amin'ny pnemonia, miaraka amin'ireo soritr'aretina mitovy amin'ny sery mahazatra.
Raha tsy misy antibiotika, ny bakteria dia mety hiparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana, ka lasa pnôlônika, izay hitrangan'ny fisefoana, fanaintainan'ny tratra, ary indraindray moka mandriaka na feno rano ny indraindray. Raha tsy voatsabo dia afaka mivoatra haingana mankany amin'ny fahafatesana ny aretina.
Ny areti-mandringana dia matetika hita any amin'ny faritra atsimon'i Sahara sy i Madagasikara - ireo faritra izay mahatratra 95 isan-jaton'ny tranga voalaza, hoy ny CDC. Matetika i Madagasikara dia mahita ny tranga trangana peste bubonic be indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny aretina 600 eo ho eo isan-taona.
Boeing dia mandefa fanentanana fanentanana any Canada
Ny filohan'ny CTO dia nanao kabary tamin'ny fisokafan'ny SOTIC